Tsanangudzo uye kududzira
"Cookie" zvinoreva faira diki yakaiswa pakombuta yako kana mudziyo neIsaiti Yedu paunoshanyira zvimwe zvikamu zveNzvimbo Yedu uye / kana kana uchinge washandisa zvimwe zvikamu zveNzvimbo Yedu;
"Mutemo weKuki" zvinoreva zvikamu zvakakodzera zveSecurity and Electronic Communications (EC Directive) Regulation 2003 uye yeEU Regulation 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR");
"Data rako pachako" zvinoreva chero data uye zvese zvine chekuita nemunhu anozivikanwa anogona kunyatso zivikanwa kana zvisina kunanga kubva pane data racho, sezvakatsanangurwa neDatha Kudzivirirwa Mutemo 1998 OR EU Mutemo 2016/679 General Data Dziviriro Regulation ("GDPR");
"Isu / Isu / Isu" zvinoreva Infinity Bhizinesi Yekukura Network,, kambani shoma yakanyoreswa muEngland pasi pekambani nhamba 09073436, ine kero yakanyorwa ndeye 2 Bromley Rd. Seaford, East Sussex, BN25 3ES, uye kero yavo huru yekutengesa isabove.
1.1 Yedu saiti ndeyayo uye inoshanda neInfinity Bhizinesi Kukhula Network, kambani shoma yakanyoreswa muEngland pasi pekambani nhamba 09073436, ine kero yakanyorwa ndeye 2 Bromley Rd. Seaford, East Sussex, BN25 3ES, uye kero yavo huru yekutengesa iri pamusoro.
1.2 VAT Kunyoresa Nhamba 252 9974 63
1.3 Wedu Dziviriro Dziviriro Officer ndi Joel Bissitt, uye anogona kufonerwa neemail at [Email akadzivirira], parunhare panhamba dzinoti 01323 332 838, kana neruoko pa 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex, BN25 3ES
Nzvimbo Yedu Inoshandisa Sei Cookies?
1.1 Yedu Saiti inogona kuisa uye kuwana mamwe mapato ekutanga ma Cookies pakombuta yako kana mudziyo. Chekutanga bato ma cookie ndeaya akaiswa zvakananga nesu uye anoshandiswa chete Nesu. Isu tinoshandisa ma Cookies kufambisa uye kugadzirisa rako ruzivo rweSiti Yedu uye kupa uye nekuvandudza Masevhisi edu. Isu takanyatsosarudza izvi Cookies uye takatora matanho ekuona kuti zvakavanzika uye yako pachako data inochengetedzwa uye inoremekedzwa nguva dzose.
1.2 Nekushandisa yedu saiti, unogona zvakare kugamuchira chechitatu munhu Cookies pakombuta yako kana mudziyo. Chechitatu bato ma Cookies ndeaya akaiswa nemawebsite, masevhisi, uye / kana mapato asiri isu. Chechitatu bato ma cookie anoshandiswa pane yedu saiti Yekuisa Insert Tsanangudzo yekushandiswa kweChitatu Party Cookies, semuenzaniso kushambadzira masevhisi. Kuti uwane mamwe mashoko, ndapota tarisa kuchikamu 4 pazasi.
1.3 Ma Cookies ese anoshandiswa nesaiti Yedu anoshandiswa zvinoenderana neazvino Cookie Mutemo. Isu tinogona kushandisa mamwe kana ese eanotevera marudzi eCokie:
3.a.1 Zvakasimba Anofanira Makuki
Cookie inowira muchikamu ichi kana chakakosha kushanda kweIsaiti Yedu, inotsigira mabasa senge kupinda mukati, bhasiketi yako yekutenga, uye kubhadhara kwekutengesa.
3.a.2 Ongorora Cookies
Izvo zvakakosha kuti Isu tinzwisise mashandisiro aunoita Nzvimbo Yedu, semuenzaniso, kuti unokwanisa sei kufamba-famba paunenge wakakomberedza, uye nezvipi zvinhu zvaunoshandisa. Analytics Cookies inotigonesa kuunganidza iyi ruzivo, inotibatsira Isu kuvandudza Nzvimbo Yedu uye ruzivo rwako mazviri.
3.a.3 Basa Cookies
Kubasa ma cookie anoita kuti tikwanise kupa mamwe mabasa kwauri pane yedu saiti saizi sekurangarira uye nekurangarira zvaunofarira zvakaponeswa. Kumwe kushanda kweMakuki kunogona kuve kwakanyatso fanika ma Cookies, asi kwete ese anodiwa anowira muchikamu icho.
3.a.4 Kuvavarira Makuki
Izvo zvakakosha kuti Isu tizive kuti rinhi uye kangani pashanyo yashanyira Nzvimbo Yedu, uye kuti zvikamu zvipi zvawakashandisa (zvinosanganisira iwo mapeji awakashanyira uye kuti ndeapi maratidziro awakashanyira). Sezvinoita analytics Cookies, urwu ruzivo runotibatsira kuti tinzwisise iwe uye, zvakare, kugadzira Yedu Saiti nekushambadzira zvakanyanya kune zvaunofarira. Imwe ruzivo yakaunganidzwa nekutarisa ma Cookies anogona zvakare kugoverwa kune wechitatu mapato.
3.a.5 Chechitatu Party Cookies
Chechitatu bato ma Cookies haana kuiswa Isu; pachinzvimbo, ivo vanoiswa nevechitatu mapato anopa masevhisi kwatiri Uye / kana kwauri. Wechitatu bato ma Cookies anogona kushandiswa neano kushambadzira mabasa kuti ashandise yakarongedzwa kushambadzira kwauri paSiti Yedu, kana nevechitatu mapato anopa analytics services Kwatiri (aya ma Cookies achashanda nenzira imwecheteyo yeanobhokisi Kuki anotsanangurwa pamusoro).
3.a.6 Kuramba Kuki Makuki
Chero ipi zvayo mhando dzepamusoro Cookie inogona kunge iri kupfuurira kuki. Ma cookie anogara aripo ndeaya anogara pakombuta yako kana mudziyo kwenguva yakatarwa uye anogadziriswa pese paunoshanyira Yedu Nzvimbo.
3.a.7 Chikamu Cookies
Chero ipi zvayo mhando dziri pamusoro Cookie inogona kunge iri musangano Cookie. Session Cookies ndeye wenguva pfupi uye anongoramba ari pacomputer yako kana mudziyo kubva pane kwaunoshanyira Yedu Saiti kudzamara wavhara browser rako. Session Cookies inobviswa kana iwe ukavhara browser rako.
1.4 Makuki kuWebsite yedu haagumi uye anozopera sekuratidzwa kwetafura iri pazasi.
1.5 Kuti uwane rumwe ruzivo rwe data rako chairo iro Isu Tinotora uye tinoshandisa, matanho atinawo kuti tidzivirire dhata revanhu, kodzero dzako dzemutemo, uye zvisungo zvedu zviri pamutemo, ndapota tarisa kune yedu Yeparamende Yeparamende pano.
1.6 Kuti uwane mamwe mamiriro akakwana ema Cookies atinoshandisa, ndapota tarisa tafura iri pasi apa.
Anotevera pati yekutanga ma Cookies anogona kuiswa pakombuta yako kana chishandiso:
Zita reKuki chinangwa Zvinonyatsodiwa
KUCHESA Yakagadzirwa uye inoramba iripo iwe uchiiswa mukati. Inodikanwa kuti ugare uchipinda mukati, kusvikira iwe wabuda kunze. Inochengeterwa mwedzi 1 Ehe
Rekodha peji rekutora, uye kwaunobva kushanya kwako, kwashandiswa analytics uye kutsvaga kutibatsira kuti tizive kunowanikwa kupi webhu traffic yedu, kuburikidza nekubaya links nemasvikiro. Kuchengetwa kwemwedzi mitanhatu Ehe
uye anotevera wechitatu Cookies anogona kuiswa pakombuta yako kana chishandiso:
Google Inc Google Universal Analytics yekutevera vashandisi uye yehupenyu traffic pane yedu webhusaiti. Inoshandiswa kuona mafambiro mumigwagwa uye inotibatsira kuvandudza kuwanikwa kwakapoteredzwa newebhusaiti. Zvinotora kwechinguva chete maawa makumi maviri nemana. ID yakasarudzika iyo inovandudzwa pachitariswa iyi webhusaiti.
_ga Google Inc Google Analytics yekutevera, yaishandiswa kuongorora kushanya kune ino webhusaiti uye kuona maitiro uye maitiro mukufamba kwakatenderedza saiti, uye inoshandiswa nesu kubatsira kubhaiza kutenderera webhusaiti uye kuziva kwazvinobva pawewebhu traffic.
Google Inc Inoshandiswa kubatsira izvo zviri pamusoro apa Google Analytics cookies nguva uchitsvaga pa mobile.Persists kwemwedzi mitanhatu
Yedu Saiti inoshandisa analytics masevhisi anopihwa neGoogle Analytics. Website analytics inoreva seti yezvishandiso zvinoshandiswa kuunganidza uye kuongorora zvisingazivikanwe mashandisirwo ekushandiswa ruzivo, zvichitigonesa kuti tinzwisise zviri nani kuti yedu saiti inoshandiswa. Izvi, zvakare, zvinogonesa kuti isu tigone kuvandudza yedu saiti uye zvigadzirwa NA / kana masevhisi anopihwa kuburikidza nazvo. Iwe haufanirwe kutendera Isu kuti tishandise ma Cookies aya, kunyangwe zvazvo Kuishandisa kwedu kusingaisi panjodzi kune yako pakavanzika kana kushandisa kwako kwakachengeteka kweSiti Yedu, zvinoita kuti Tigone kuramba tichivandudza Nzvimbo Yedu, ichiita iri nani uye nezvimwe. chiitiko chinoshanda kwauri.
Iyo analytics service (s) inoshandiswa neNzvimbo yedu yekushandisa (s) Cookies kuunganidza ruzivo runodiwa.
Iyo analytics service (s) inoshandiswa neIsaiti yedu yekushandisa (s) iyo inotevera ma Cookies:
Zita reKuki Kutanga / Chechitatu bato
Chetatu Google Inc Google Analytics yekutevera, yaishandiswa kuongorora kushanya kune ino webhusaiti uye kuona maitiro uye maitiro mukufamba kwakatenderedza saiti, uye inoshandiswa nesu kubatsira kubhaiza kutenderera webhusaiti uye kuziva kwazvinobva pawewebhu traffic.
_gid Chetatu Google Inc Google Universal Analytics yekutevera vashandisi uye yehupenyu traffic pane yedu webhusaiti. Inoshandiswa kuona mafambiro mumigwagwa uye inotibatsira kuvandudza kuwanikwa kwakapoteredzwa newebhusaiti. Zvinotora kwechinguva chete maawa makumi maviri nemana. ID yakasarudzika iyo inovandudzwa pachitariswa iyi webhusaiti.
_gat Chetatu Google Inc Inoshandiswa kubatsira izvo zviri pamusoro apa Google Analytics cookies nguva uchitsvaga pa mobile.Persists kwemwedzi mitanhatu
Kubvumirana uye Kudzora
1.1 Cookies akaiswa pakombuta yako kana mudziyo kushanyira Yedu Saiti. Nekushanyira Yedu saiti iwe uri kupa kubvumidza kwako kuiswa kwema Cookies uye vari kutigonesa Isu kuti tipe zvakanakisa ruzivo uye sevhisi kwauri.
1.2 Pamusoro pekudzora kwatinopa, unogona kusarudza kugonesa kana kudzima ma Cookies mubrowser yako yewebhu. Mazhinji mabhurawuza ewebhu anoitawo kuti iwe ugone kusarudza kuti unoda here kudzima ma Cookies ese kana munhu wechitatu Cookies. Nekutadza, vashandisi vazhinji vewebhu vanogamuchira ma Cookies asi izvi zvinogona kushandurwa. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota bvunza iyo menyu yekubatsira mune yako internet browser kana zvinyorwa zvakauya nechishandiso chako.
1.3 Izvo zvinongedzo pazasi zvinopa mirayiridzo yekuti ungadzora sei ma Cookies mune ese makuru makuru esports:
3.a.3 Microsoft Edge: (Ndokumbira utarise kuti hapana chero mirairo panguva ino, asi Microsoft tsigiro ichakwanisa kubatsira)
3.a.7 Android: (Ndokumbira utorere kune chako chinyorwa zvinyorwa zvevagadziri vamene vabhurawuza)
1.2 Muchiitiko chekupokana kupi nekupi pakati peshanduro yenyaya ino yeCkey Cookie uye chero shanduro yapfuura (s), zviripo izvozvi zvichashanda kunze kwekunge zvataurwa zvakajeka.
1.1 Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve mashandisiro Atinoita ma Cookies, tapota taura nesu ku [Email akadzivirira] kana parunhare panhamba dzinoti 01323 332 838, kana kutumira pa2 Bromley Road, Seaford, East Sussex, BN25 3ES.
1.2 Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvekuvanzika, kuchengetedzwa kwedata uye mamiriro uye mamiriro edu, ndapota shanya zvinotevera:
Shandurudza yako yemuno Bhizinesi Munharaunda… Iva nemafungiro nezve varidzi vemabhizinesi emuno vaunoziva… mikana ndevanosimudzira yavo…